Filtrer les éléments par date : jeudi, 05 décembre 2019
jeudi, 05 décembre 2019 21:12
Fitsarana fifidianana: Nitokona ny mpirakidraharaha
Nahatsiaro latsa-danja ny fomba hitantanana ny fitsarana ny fifidianana ireto mpirakidraharaha eo anivon'ny fitsarana, izay misahana ny fikirakirana ny vokam-pifidianana kaominaly, natao ny 27 novambra lasa teo.
Raha ny fantatratra dia tsy misy ampahafolon'ny tambi-karama azon'ireo mpitsara no omena ny mpirakidraharaha, nefa samy manao ny asa fikirakirana ny fifidianana.
Tsy mihambo hitovy amin'ireo mpitsara akory izahay hoy hatrany ireto mpirakidraharaha ireto, fa mba tsy rariny kosa ny elanelana misy amin'ny fitondrana anay.
jeudi, 05 décembre 2019 17:22
Anosy: Fampirantiana ny asa soratr’i Brench Mbolamasoandro
Notontosaina tetsy amin’ny tranom-bokimpirenena Anosy ny fampirantiana ny asa soratr’i Brench Mbolamasoandro
Ka ny hevitra navoitra tamin’izany moa dia ny hoe ”Izao rehetra izao”, izay anehoana ireo sangan’asa maro samyihafa nodiavina tamin’izay lalan’ny sehatry ny kanto izay.
Maro ireo sangan’asa izay nampirantiana tao, toy ny asa soratra, ny akanjo, ny hosodoko; anisan’ny mampivoatra ny fifaneraserana amin’ny olona ny asa soratra hoy ramatoa Brench Mbolamasoandro raha nanome ohatra izy ny hoe “olona izay tsy nifanerasera nandritry ny taona maro, kanefa dia nampihaon’ny asa soratra“, ary anisan’ny hery lehibe ny hetsika toy izao mba ahampafantarana ireo kanto rehetra aseho amin’ny olona mpankafy, ary sarotra ny lalana nodiavina vao mahavita hetsika anakiray.
jeudi, 05 décembre 2019 14:29
Pedro OPEKA: Notolorana ny amboara « Fondation Air France 2019 »
Isaky ny roa taona ny « Fondation Air France » dia manome loka fankasitrahana ireo fikambanana mandray an-tanana ireo ankizy tsy salama, manana fahasembanana na tra-pahasahiranana lalina. Tamin’ity taona ity, dia mompera Pedro OPEKA sy ny « Akamasoa » no voasafidin’ny « Fondation Air France » nahazo fankasitrahana.
Tao amin’ny mozea Musée quai Branly ao Parisy renivohitr’i Frantsa no natao ny lanonana nanoloran-dRtoa Anne Rigail, filohan’ny « Fondation Air France » ny loka tamin’ny mompera Pedro. Nanome voninahitra izany Rtoa Brigitte Macron, vadin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron.
Folo taona amin’ity 2019 izao ny « Fondation Air France ». 30 taona nandraisana an-tanana ireo olona sahirana sy nampivoatra ny fiainan’izy ireo kosa ny « Akamasoa » eny Andralanitra, naorin’ny mompera Pedro.
jeudi, 05 décembre 2019 14:18
Ambohimiandrisoa-Antsirabe: Mivangongo tsy voaraoka ny fako
Mitaraina ny mponina eto Ambohimiandrisoa, Kaominina ambonivohitra Antsirabe, Faritra Vakinankaratra noho ny loto sy ny fako miavosa. Ahiana ny valanaretina !
jeudi, 05 décembre 2019 14:15
5 décembre: Journée Mondiale de l'égalité des chances
5 décembre: Journée Mondiale de l'égalité des chances.
jeudi, 05 décembre 2019 14:13
5 décembre: Journée mondiale des sols.
jeudi, 05 décembre 2019 14:11
5 décembre: Journée mondiale du bénévolat.
jeudi, 05 décembre 2019 14:01
Ankazoabo: Mirongatra ny vaky fasana sy vono olona miaro halatra taova
Nisesy ny vono olona miaro halatra tato amin’ny Distrikan’Ankazoabo tato ho ato. Ny alatsinainy teo tao Ambalamarina, dia tovolahy iray 18 taona no maty nisy namono, ary noloarana ny voamasony roa. Lehilahy iray ihany koa no maty nisy namono tao Ampandramitsetaky, Kaominina Tandrano. Tranga toy izany koa no niseho tao Morahariva, Kaominina Berenty.
Miantso vonjy amin’ny manampahefana ihany koa ny aty an-toerana manoloana ny firongatry ny vaky fasana tato ho ato. Hatreto tsy misy voasambotra ireo navanon-doza.
jeudi, 05 décembre 2019 13:59
Fitsarana Avo: Idealison sy Rivotiana Jean Bosco no solontenan’ny Antenimieram-pirenena
Voafidy omaly ireo depiote solontenan’ny Antenimieram-pirenena ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo na « Haute Cour de Justice ».
Voafidy ho mpikambana raikitra i Idealiso izay, solombavambahoaka voafidy tao Ampanihy, Faritra Atsimo Andrefana, sy Rivotiana Richard Jean Bosco izay solombavambahoaka voafidy tao Lalangina, Faritra Matsiatra Ambony.
Voafidy ho mpikambana mpisolotoerana i Mamizara Yasmirah Loeticia izay solombavambahoaka voafidy tao Besalampy, Faritra Melaky, sy Rafenomanantsoa Tsirimaharo Ny Aina na Anyah izay solombavambahoaka voafidy tao Antananarivo III.
jeudi, 05 décembre 2019 10:08
Météo: Situation 05 décembre 2019
(Photo satellite 05 décembre 2019 à 8h)